Vaovao - mpitarika loharanom-pahazavana salama 2020 - Miaraka aminao i ShineOn
Mpitarika loharanom-pahazavana salama 2020 - handeha miaraka aminao i Brighton
Ny taona 2020 dia nanatri-maso hery majeure natoraly maro. Nandritra ny dingan'ny fampifanarahana indray ny olombelona sy ny natiora dia nanomboka ihany ny fampirantiana ny jiro iraisam-pirenena Guangzhou, izay nahemotra efa ho telo volana. Nifikitra hatrany amin'ny làlana ara-teknikan'ny 'jiro mahasalama' i Shineon. Amin'ny maha 'mpitarika loharano maivana mahasalama' azy, ny vokatra nasehon'i Shineon dia mifantoka amin'ny fanomezana ny filan'ny mpanjifa loharano maivana avo lenta.
Pazhou Exhibition Hall 10.2 C02 no trano heva an'ny Shineon, izay mampiseho andiam-vokatra Brighton isan-karazany.
Shineon dia nanolotra ny hevitra feno momba ny hazavana salama hatramin'ny 2016, ary izy no nitarika ny fampiratiana ireo vokatra feno spectrum tamin'ny taona 2017. Ankehitriny dia nohosorana tsy tapaka izy ary natsipy tao anaty andiany efatra mahazatra: andian-tsarimihetsika maso, andiam-piarovana amin'ny maso , Andian-Sunshine ary andian-tsarimihetsika sy fahitalavitra. Ny andiany efatra dia mifototra amin'ny filan'ny mpanjifa sy ny fampiharana fampiharana mifanaraka amin'izany, manome ny tombony samihafa amin'ny andiany jiro feno spektrum. Ny fiasa mahazatra dia ny fanjifana herinaratra ambany ary mahasalama kokoa.
* Ny andiany Ra98 Kaleidolite dia manana tombony amin'ny famolavolana loko avo, ny fahamendrehana ary ny saturation avo.
* Ny andiam-piarovana ny maso dia manana ny mampiavaka ny fitohizan'ny spectral tsara sy ny jiro manga misy angovo ambany.
Matetika izy io dia ampiasaina amin'ny fampianarana sehatra hiarovana tsara ny fahitana.
* Ny andian-jiro amin'ny masoandro dia manana fandokoana loko tsara kokoa noho ny volony volomparasy izay manakaiky ny masoandro.
Matetika izy io dia ampiasaina amin'ny tranga toa ny fitomboan'ny zavamaniry, ny fanamorana ary ny bakteria.
* Ny andian-jiro studio dia manana index TLCI avo, izay mety amin'ny fampiharana jiro fanampiny.
Ny vokatra COB dia iray amin'ireo vokatra fototra ao Shineon. Manaraka ny foto-kevitry ny loharanom-pahazavana avo lenta, avo lenta ary loharano maivana mahasalama dia nandefa andiany fitaratra COB andian-dahatsoratra, andian-tsarimihetsika COB seramika, andiany COB feno spektrum, ary andiany COB mari-pana azo ovaina mba hihaona amin'ny mpanjifa fangatahana fangatahana samihafa.
* Ny andian-dahatsoratra COB an'ny Aluminium dia manana tombony amin'ny fahombiazan'ny hazavana avo sy fitondra hafanana avo;
* Andian-tsarimihetsika COB Ceramic dia manana tombony amin'ny fanoherana ny tosidra avo lenta ary tsy misy atahorana ny fanadiovana volo;
* Ny andian-dahatsoratra COB feno dia manana tombony amin'ny fanimbana jiro manga ambany, fahombiazan'ny hazavana avo lenta ary fandokoana loko tsy misy fanodikodinana;
* Ny vokatra serivisy serivisy COB mari-pana dia manana tombony amin'ny fampiasa fampiharana herinaratra midadasika, haben'ny fanitsiana maripana miloko marobe, CRI avo ary fahombiazan'ny hazavana avoavo. Izy ireo dia azo ampiasaina amin'ny seho isan-karazany toy ny jiro ao an-trano, jiro amin'ny toeram-pivarotana, tranombakoka, kianja sns.
Ny fiovan'ny lokon'ny tsiranoka COB azo hafanaina SHINEON
Amin'io sehatra io ihany dia ampitahaina ny vokatra CRI samihafa
Ny ekipa matihanina R&D an'i Shineon dia manome antoka matanjaka amin'ny fanamorana ny vokatra sy ny fampiharana marobe, toa ny andian-dahatsoratra vaovao UV, andian-tselatra finday, andiam-modely DOB, sns., Izay manana fangatahana tsena marobe. Miorina amin'ny fahaizan'ny R&D mahery sy ny fahaizan'i Shineon afaka manome vahaolana ho an'ny mpanjifa ho an'ny loharano maivana manokana.